Isbeddellada Art Contemporary: что такое
ugu weyn ee » news » Isbeddellada Art Contemporary
farshaxanka casriga ah iyo suuqa tahay ayaa waxaa loo kordhiyay leh maalin kasta maraya. Dabcan, technology dar dar geliyay cusub si ay ula kulmaan fanaaniinta cusub iyo isbeddellada. Tani ma aha daruuri in ay booqdaan bandhigyo iyo matxafyada, raac sii daayo ee buugga cusub: ku filan in ay ku xidhmaan Internetka - oo dunida ka mid ah tahay ka Qarniyadii hore in maalinta la joogo muuqataa indhaha ka hor. Aan la isbeddellada hadda ka jira farshaxanka casriga ah ka qaban.
Maqaalkani waxa uu u falanqeeyaan isbeddellada waaweyn ee dunida muuqaallo kale, qaab iyo goobaha.
images view aad u xiiso badan oo dunida ka mid ah design graphic. La gaaray by baddalayso images, wax-u saamayn Gluck, gaar ahaan dunida digital - arrimuhu caan ka mid ah fanaaniinta. Markii hore, dhaf sida a, lahayo ku cajiib ah dhibsado. Si kastaba ha ahaatee, farshaxanka casriga ah ayaa isugusoo xoogaa tallaabooyin kor ku xusan: ah, Maxaa loo isticmaalaa in lagu guursaday, Haddaba abuuro gaar ah a. 2018 sanadkii – поистине время, marka images leh saamayn Dicumintiyo qaadashada dunida.
Halabuurka The buugaagta
Mar kale, qaab farshaxan, in ay ahayd wax aan macquul aheyn in la qiyaaso sano ka hor. Iyadoo horumarinta qaab elektaroonik ah, warqad version, nasiib daro, Waxaa la socday iyada oo xilliga ugu fiican oo ka mid ah. si kastaba ha ahaatee, Fanaaniinta aduunka soo arko indhaha ka dibna kala duwan, in dadka kale si fudud ku xiran, iyaga, waayo, waa wax si ay u abuuraan masterpieces. raso in buugaagta noqday wax dhismaha, kaas oo u dhashay tirooyinka cajiib ah, Qaab-dhismeedka. Foomka iyo content kasta oo kale oo laga yaabaa ama, ama isku dhacay, guud ahaan jawaab ka dhagaystayaasha kala duwan.
fanaaniinta qaarkood waxay door bidaan in ay yabban ee dhirta iyo ugaarta, Rachel tus Asha (Rachael Ashe), kale, sida Anouk Kruitof (Anouk Kruithof) Waxaa abuuray farshaxan a dumi derbiyada. Waayo, dadka hal abuurka qaab aad buugaagta waraaqaha, dictionary, qorkiisa noqday Muuse a. In gacmahooda, dhagaystayaasha arki doonaa buug la xagal ka duwan, laakiin aan ka yarayn qurux badan.
Farshaxan ka samaynta Lego
Waxaa la malaysan karin, in abuureyaal oo ka mid ah darey lala yaabo ama si fudud ma koraan in nafta, ama si fudud ayaan ciyaarin ku filan. Si kastaba ha ahaatee, fannaaniinta ku abuuro taalada ma ahan oo keliya dahsoon, maraakiibta burcad fudud ama Daar wayn, iyo qiyaasta cajiib ah iyo foomka of, совершенно не детские объекты прикладного искусства.
Почти полвека назад был создан этот знаменитый конструктор, и мало найдется в мире людей, которые не пробовали строить из деталек что-либо. Laakiin fanaaniinta, xataa sida Ciyaalle at jaleecada hore, waxyaabaha uu noqday dhagaxa tallaabsashada si jihada cusub ee adduunka ee farshaxanka casriga ah. Mid ka mid ah abuuray ugu caansan heeso cajiib ah sida aduunka ee - American neo-sculptor Nathan Sawaya. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah shuqulladiisii: Dhalmada ee Edvard Munch ee "siidaynay The", nuqul ka mid ah Parthenon iyo, danbaynti, четырехметровый скелет тираннозавра.
Dharka iyo Xadhig rakibaadda
Maxaa ka samaysaa, waxay u muuqdaan lahaa, Xadhig caadiga ah ama dunta? Artists in this waxyaabaha la yaqaan reerka kooxda aan caadi ahayn u yimid. Iyagu ma tolo ama daabacdaa, iyo dhar sameyn.
Tusaale ahaan,, Japanese Chiharu Shiota qaybood maroojin agagaarka qolka noocyo kala duwan oo items. Qaar ka mid ah daawadayaasha u bogi shuqullada, kuwa kale ka fiirsan iyaga noqdo gudcur iyo argagax. si kastaba ha ahaatee, Waxa aanu jalaq. Mexico Gabriel Dave abuuraa ah loo xirxiro oo baaxad weyn oo xiiso leh daah qaansoroobaad. Shuqulkiisa qoraaga isku dayo inuu ka tarjumaya baahida aadanaha ee badbaadinta iyo hoy. Scott Hove of filaments, xadhko, bechevok, weaves web ka mid ah xadhko. Laakiin Emil Lukas, Isticmaalka wax aan caadi ahayn sida an, barbaro sawiro. Saas ma aha dhul of threads midab guddiga alwaax, abuuraya a nidaamyada la taaban karin cajiib ah.
Ku xusan fanaaniinta wax yar uun. In dunida ka mid ah qorayaasha badan, taas oo abuuri cajiib ah in ay rakibaadda asalnimada, ka tarjumaysa on dhammaan noocyada kala duwan ee mawduucyada, inay faraqa.
Author asalka ah
arrimuhu xiiso leh, taas oo kuu ogolaanaya in aad si aad u iibsato masterpiece ah ma milyaneerka oo keliya, iyo kuwa aruuriya tahay. kopipasta Epoch ogolaan waayo, deymo cusub ee fikradda ah soo saaridda shuqullada tahay in dhowr siyaabood oo kala duwan iyo qaybaha kala duwan qiimaha.
waa maxay. Sawirka waxaa lagu daabacay in edition xadidan ama warqad, ama on shiraac. Sidaas darteed, mid kasta oo nuqul ee asalka ah, waa certified.
tahay wadada Interactive
Nooca tahay wadada waa kala duwan iyo wejiyo: Qorayaashu waxay isku dayayaan ma ahan oo keliya in ay soo bandhigaan shuqulladoodu, laakiin sidoo kale in ay ku lug leeyihiin dhagaystayaasha in ay ciyaarta. farshaxanka Street hadda la yaab ma laha - qaar ka mid ah waxa ay u arkaan kharibaad, iyo kuwa kale ayaa ka fiirsaneysa iyo hadlayaan gaar jeclaa shaqada. Aad u badan oo si fiican u yaqaan in farshaxanka fannaaniinta adduunka isku day ay gacanta at sida ku sifayn asal ah, laakiin si qarsoodi ah.
Waxa ugu weyn ee in sawiradaan - taasi waa fikrad ah, qoraaga waxa uu isku dayayaa si uu u gudbiyo in ay dhagaystayaasha.
Caalamka cajiib ah, fanaaniinta Abuuran, ku lug leh waxyaabaha dhabta ah ama waxyaabaha ku nool, iyo sidoo kale abuurista dad aad u yar. Mowduucyada Mirkov cajiib kala duwan: xaqiiqada isku midka ah, carruurnimada ama daqiiqad caadiga ah ee nolosha. Sawiirrada waxaa u bogi ay sax. Gaar ahaan marka odayga la khiyaali cajiib ah kana soobixiya wax xaqiiqada nolosha meel yar.
qorayaasha Qaar ka mid ah lows caadiga beddelay geedka Martian, sanduuqa kale oo dhirta ka buuxsami, ciid iyo dadka, halka dhalada saddexaad Fanta waayo, nimankii - waa warshad buuxiyo vinogradinok.
farshaxanka casriga ah ayaa ka baxsan xarumaha iyo kulliyadaha tahay, waxaa gabi ahaanba ma aha mid ah, in ay go'aansatay in ay muujiyaan in matxafyada. Oo dhan of this waa weyn, sababtoo ah ma loo baahan yahay in la abuuro xuduudaha, iyo malaha waa la koobi karayn. Sidaa darteed, mustaqbalka aynu ka filan waa in si aad u aragto xataa isbeddellada ka badan oo aan caadi ahayn, ay sabab u tahay taas oo qorayaal shuqullada asalka ah ku farxi doonaa dhagaystayaasha.